Dhismaha Kaabayaasha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha
Bulshooyinka caafimaadka qaba waxay u baahan yihiin kaabayaal casri ah si loo ilaaliyo tayada nolosha oo wanaagsan iyo koboc dhaqaale oo waara. Ganacsigu wuxuu lashaqeeyaa hogaamiyaasha bulshada iyo shuraakada gaarka ah si loo aqoonsado loona maalgeliyo mashaariicda laxiriira biyaha gudaha iyo kuwa warshadaha, biyaha duufaanka, biyaha wasakhda ah, dhismayaasha dadweynaha, isgaarsiinta, tas-hiilaadka dekedda, beeraha ganacsiga iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha dhaqaalaha.
Barnaamijyada cimilada ee ganacsiyada iyo milkiileyaasha guryaha, deeqaha si looga dhigo dhismayaasha dadweynaha kuwo tamarta ku habboon, maalgelinta aasaaska tiknoolajiyadda nadiifka ah R & D
Dhisida jaaliyadaha ayaa udub dhexaad u ah shaqadeena, xildhibaanada Washington waxay ku aaminaan Ganacsiga inay maal gashadaan ilaa $ 1 bilyan oo ka mid ah miisaaniyada gobolka ee sanad kasta. Waxaan la shaqeyneynaa gobollada, magaalooyinka, dekedaha iyo kuwa kale ee ku hareeraysan gobolka si loo dhiso mustaqbal wanaagsan dhammaan muwaadiniinteenna.
Kaabayaashu waa aasaasi. Kobaca dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ayaa ah qaybo isku dhafan oo u baahan maalgashi dadweyne oo lagu sameeyo waddooyinka, buundooyinka, nidaamka biyaha iyo bulaacadaha.
Barnaamijku wuxuu hagaajinayaa jawiga dhaqaale, bulsho iyo jireed ee u qalma, magaalooyinka miyiga ah iyo degmooyin si kor loogu qaado tayada nolosha ee dadka degan ee dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah, natiijadaasna, wuxuu caawiyaa bulshada oo dhan.
Laga soo bilaabo 1982, jawaabta debecsan ee CERB ee ku aaddan fursadaha koritaanka ee ka soo ifbaxaya bulshooyinka gobolka oo dhan waxay abuurtay in ka badan 34,000 oo shaqo joogto ah.
Waxaan ka caawinaa jaaliyadaha qorsheynta mustaqbalkooda. Kooxdayadu waxay caawisaa oo hagtaa dawladaha hoose, hay'adaha gobolka, iyo kuwa kaleba si loo maareeyo koritaanka iyo horumarka la jaan qaadaya Sharciga Maareynta Kobaca (GMA).
Si loo caawiyo duqa magaalada, maareeyayaasha magaalada iyo saraakiisha kale ee maxalliga ah si ay ula socdaan macluumaadka iyo ilaha laga heli karo Ganacsiga, waxaan u samaynay bog aan ku fududeyno helitaanka waxa aad raadineyso.